Onye na-emepụta ihe ọkụkụ na - emepụta ihe eji eme ntụ ntụ-Scienceherb
Osisi na emeputa ihe mmeputa
Osisi ya na-emeputa ihe mmeputa
Mkpụrụ osisi herbal
Okike osisi ewepụtara
Akụrụngwa ngwaahịa ahụike
Ezigbo nkwa nke sayensị
Ruo ọtụtụ puku afọ, ejiriwo ahịhịa, mụọ, na eme ememe maka ọgwụ.
Ihe kachasị mkpa na Scienceherb bụ ịgba mbọ hụ na nchekwa nke ngwa ahịa anyị. Nkpukpo ahihia nke ahihia ya na ihe ndi ozo bu: ogwu nke di na ya, agba ya na ọka ya, uto ya, isi ya, ntupu ya, ntughari ya, ikike ya, ihe onodu ya na inye ya. Ihe ngbochu ogwu, ihe nyocha nke umu ihe ndia, njiri mara ihe omuma di na nwunye, wdg. Iji mezuo ụkpụrụ ahu siri ike, Scienceherb guzobere Oru Oru Oru (SOP) na ogbo nke obula. Naanị batrị ndị gafere ụkpụrụ nnwale anyị siri ike na usoro nyocha nwere ike ịhapụ.
Sayensi na-elekwasị anya na imepụta ahịhịa na akụrụngwa ahịhịa. Ejikọtara na nsonaazụ nyocha anyị na ọrụ osisi, anyị na-enye akụrụngwa akụrụngwa na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ntinye maka nri na ahụike, mgbakwunye nri, yana ọrụ nlekọta.
Etu esi eme ezigbo ngwaahịa ngwaahịa
Weputara ihe ndi ozo eji aru oru onu ahia
Rawkpụrụ akụrụngwa dị iche iche dịgasị iche iche dabere n'ụdị ha dị iche iche, ọnọdụ ito eto, afọ uto, otu eji eme ya, ụzọ nkwadebe, ọnọdụ ngwaahịa, wdg, ha niile na-emetụta ihe ndị dị ndụ. Iji hụ n'ịrụpụta ezigbo ihe mmịpụta na-agbanwe agbanwe, ọ dị mkpa ka akụrụngwa Raw Matrials SOP dị mkpa. Isi ihe gụnyere:
Nyocha Egosiputara Umu anumanu
Nyocha bụ mkpebi nke ụdị agbụrụ ziri ezi, mmalite na ogo nke ahịhịa ndị China. Usoro nyocha nke Scienceherb bu n’obi igbochi ojiji nke ahihia anwuru-eji, ma obu site na njirimara hiere ma obu iji dochie anya ihe nlere.
TCM herbalism na-emesi echiche Da Dao aka na ebe niile. A kọwapụtara Dao Di herb dị ka ihe ọkụkụ ga-emepụta nke ọma na mpaghara ndị akọwapụtara nke ọma na usoro ịkụzi na usoro nhazi kemgbe Tang Dynular (618 - 907 OA) maka akụkọ ntanetị ogologo, dịka Bai Shao (Bai Shao / White Peony nke Bozhou) , Huai Di Huang (Di Huang / Rehmannia nke huaiqing oge ochie, Henan), Ningxia Gou Qi (Gou Qi / Lycium Mkpụrụ nke Ningxia).
Ctszọ Mbuli Afọ & Ihe Siiri
Ahịhịa na-achịkọta tupu ito eto nwere ike bute ogo adịghị mma. Dị ka Astragalus, dịka ọdịnala kacha mma kwesịrị ịnọ gburugburu 5 ~ 6 afọ nwere dayameta nke 2 ~ 3cm, ndị eji eme ihe bụ mgbọrọgwụ. Ugbo ahihia eji ya eme osisi dika Eucommia kwesiri idi 10 ~ 15 ka odi elu nke 3 ~ 6cm.
Nchebe Hygienic Nche
Otu ụgwụ nke osisi ọ bụla ga-aga nyocha ọfụma maka ịdị ọcha tupu ịga n'ihu. Scienceherb na-ewere usoro nyocha dị iche iche gụnyere: ● Nchọpụta Sulfur Dioxide ● Nchọpụta ọgwụ na-egbu egbu D nchọpụta Aflatoxin ● Nnukwu Egwu.
Usoro Ntinye Mgbakwunye Nwetara SOP
N’adịghị ka kemịkal / ọgwụ na sịntetik, ihe mejupụtara ya na ahịhịa dị mgbagwoju anya karịa, ya mere, ọgwụ mkpịsị ahịhịa na-abụkarị ngwakọta nke otu ma ọ bụ ọtụtụ ihe mejupụtara. Ọ bụ ihe ndị herbal extracts 'multi-components e ji mara na-ekpebi na ọ bụ ọgwụ ọgwụ ọtụtụ arụmọrụ ebe, wee debe ahụ mmadụ na ahụike zuru oke ka ihe niile. O doro anya na ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya ikpebi njimara nke otu onye rụrụ. Ebumnuche nke Usoro Mgbatị SOP bụ iji nọgide na-enwe nkwụsi ike dị otú ahụ zuru oke. Isi ihe gụnyere:
Ozugbo ahọpụtara ọgwụ mkpuru osisi kacha mma, a na-asacha ya ma dozie ya dịka usoro dị iche iche ahaziri maka ogwu ahụ. A na-ekpocha unyi na ihe ndị ọzọ si mba ọzọ jiri nke ukwuu wee kpochaa ma ọ bụ dozie ahịhịa ndị ahụ na pao zhi ọdịnala tupu ewepụta ya. Pazọ Pao Zhi dị iche (preparationzọ nkwadebe) nwere ike ime ka mkpịsị ahịhịa dị na-agbanwe nke ukwuu.
Ntughari & ntinye uche
Mpempe akwụkwọ dị iche iche nwere ike iche na ya mere ọ ga-ewere usoro mmịpụta dị iche. Maka imirikiti ahịhịa anyị na - eji mmiri dị ọcha dị ka ihe mmịpụta. Okpomoku a na –eziwanye anya na oge ndi ozo di iche na ahihia nile ma na - achịkwa ya nke ọma. Karịsịa maka mkpịsị ahịhịa nwere ihe na-emetụta okpomọkụ, usoro obere okpomọkụ nwere ike ichebe ikike nke ihe ọkụkụ nke ga-emebi ma ọ bụrụ na ekpughere ya ruo ogologo oge.
Mweghachi Mmanụ Mkpa
Otu usoro dị oke mkpa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amịkọta gụnyere nchịkọta mmanụ na-esi ísì ụtọ site na mkpịsị ahịhịa, bụ nke na-abụkarị ihe ndị na-eme bioactive. Usoro ihe omumu ihe eji eme ihe nke Scienceherb gosiputara mmanu mmanu site na “onya mmanu” nke jikoro ya na sisitemu iji wepu ma chekwaa mmanu ndi ahu di egwu. A na-agwakọta ha azụ na extracts na njedebe nke usoro. Mmanụ ndị dị mkpa na-abawanye ike ma na-enye ahihia ahụ na isi ha.
A na-agwakọta mmịpụta mmiri dị ukwuu site na iji igwe na-agbaze ngwa ngwa dị elu. N'ime usoro a, a na-emebe nsị mmiri mmiri ka ọ bụrụ ọmarịcha mmiri, nke a na-awụnye ya n'usoro n'ọkụ na-agafe agafe. A na - eme ka okpukpo nke okpukpu a dikwaa ngwa ngwa, a na - akpọnwụkwa ụmụ irighiri mmiri ozugbo ahụ ụmụ irighiri ihe. Usoro nhicha ahụ dum na-emecha na sekọnd ole na ole ma nọgide na-enwe mkpá akwụkwọ.
Emechara Nyocha ngwaahịa SOP
Nsonaazụ nnwale nwere ike ịdị iche site na usoro nnwale dị iche iche, ihe eji achọ ọfụma, na ịkwadebe nke nlele, wdg. N'ihi ya usoro usoro nnwale dị mkpa iji nweta nsonaazụ na-agbanwe agbanwe maka nsị ahịhịa. Nnwale nnwale ndị dị elu na-enyocha ọtụtụ n'omume na ibe ọ bụla iji tụọ ikike na iji gosipụta nchekwa nke ngwaahịa. Ule a gụnyere ihe ndị a:
UV / HPLC / UPLC-MS-MS iji tụọ isi ihe ndị na-eme ka ndụ rụọ ọrụ.
FFETTM (Frayprint Full-Spectrum Technology Production) iji kpebie ụdị ịdị mma mmuta
AAS / ICP-MS iji nwalee ọla dị arọ.
GC-MS-MS iji hụ na nchekwa dị na nnwale maka ọnụnọ nke ihe ndị na-egbu egbu.
Nje microbiological na-enyocha E. coli, salmonella na otutu ihe ndi ozo nwere ndu ndu dika ete.
Wepụ galik mmanụ (8000-78-0)
Yohimbine ntụ ntụ (146-48-5)
Huperzine ntụ ntụ (102518-79-6)
Icariin ntụ ntụ (489-32-7)
Ihe niile I Kwesịrị aboutmara banyere Tribulus terrestris wepụ
Ntụziaka kacha nso maka mbupu galiki maka ịdị arọ
Ntụziaka kachasị na Lotus Leaf wepụ maka ịdị arọ
Ntụziaka kachasị na White Willow Bark Extract maka Nnukwu ibu
© Copyright-2020- Sayensi